Mitobaka eto Antsirabe ny hosoka
Ankavitsiana ihany ny entana amidy eto amintsika no tsy vita sinoa. Saika marika hala-tahaka avokoa anefa no tonga eto Madagasikara hatramin’izao. Ny finday no tena lasibatr’io hosoka io. Ny ao Antsirabe kosa, manampy trotraka ny ataon’ireo mpanararaotra amin’ny fivarotana entana “piraty”.
Des oreillettes pour faire le bonheur de 2418 personnes
La collaboration entre le gouvernement malagasy et la société de service Rotary Club avec l’organisme international Starkey Hearing Foundation vient de doter 2418 personnes d’oreillettes.
Nampidi-doza ny herinaratrin’ny Jirama tao Mandaniresaka Antsirabe
Nipoaka ny “transformateur”-n’ny Jirama tao Mandaniresaka Antsirabe ny alatsinainy tamin’ny 8 ora sy sasany alina. Tariby tapaka mbola misy herinaratra mahery vaika nandoro mpianatry ny Seminera.
Les routes tuent
Les entités impliquées dans la sécurité routière ont signé ce matin au Parvis de l’Hôtel de Ville à Antananarivo une lettre d’engagement dans laquelle ils promettent de faire de la sécurité des écoliers leur priorité. En attendant l’impact de cet engagement, les routes tuent parce que…
Mifanaretsaka ny tanora mitady asa ao Antsirabe
Mitombo isan’andro ireo tanora mitady asa amin’ny orinasa afakaba ao Antsirabe. Hipoka ny anoloan’ny vavahadin’ny orinasa, ary mahavatra miaritra ny lazon’andro mihitsy ireto tanora ireto. Mba hanànana hoavy iriana hamiratra no antony. Hanovozam-pahalalana bebe kokoa.
Sarotra ny hampilamina ny fifamoivoizana eto Antsirabe
Foana tsy nisy niangana intsony ireo takelaby famantarana ao Antsirabe renivohitra. Samy manao izay saim-patany avokoa ankehitriny na ny mpamily na ireo olon-tsotra. Miandry ny vahaolana avy amin’ny tomponandraikitra ny mponina amin’izao fotoana izao.